သူဌေးရဲ့ပိုက်ဆံသည်ထိုသူကိုကယ်တင်နိုင်ဘူး။ ပိုက်ဆံကောင်းကင်သို့သငျသညျမကယ်တင်နိုင်ပါ။ သင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မဝယ်နိုင်ပါ။ ဒါဟာမဖြစ်နိုင်ဘူး။
လုကာ 16:19 ခရမ်းရောင်နှင့်ပိတ်ချောကိုဝတ်လျက်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်အခမ်းအနား၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေထိုင်ခဲ့ခံခဲ့ရသူတစ်ဦးသူဌေးရှိခဲ့သည်။
သူဌေးတစ်ဦးအပူအပင်ကင်းပြီးဘဝအသက်ရှင်။ , သူကဤမျှလောက်များစွာသောယနေ့လူအသကျရှငျနထေိုငျခဲ့။
သူတို့ကယခုအချိန်တွင်အသက်ရှင်နှင့်မည်သည့်အချိန်ကတစ်ဦးထာ intrude နိုင်ပါတယ်ရှိသည်ဟုမထင်ကြပါဘူး။
လူကိုမပျော်မရဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကနေ့တိုင်း "ဝမ်းမြောက်သောစိတ်" နှင့် "ပါတီ" တွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်နဲ့ယေရှုမပါဘဲတစ်ဦးဘဝ၌ကျင်လည်သောသူပြည်သူ့မပျော်နှင့်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါဘူး။
သူတို့ကဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိသည်နိုင်နှင့်၎င်းတို့၏ဘဝများကိုပွဲခံစေနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်အသက်တာမှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ထာဖို့သဘောတူမထားဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကယခုအချိန်တွင်ပျော်ရွှင်ကြောင်းခံစားရပေမည်။
သငျသညျယရှေုကိုလိုအပ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ယင်းအကြောင်းပြချက်သညျယရှေုမပါဘဲသင် irretrievably ထာဝရငရဲဆုံးရှုံးနေကြသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
သငျသညျယရှေုကိုမပါဘဲဆုံးရှုံးခဲ့ရနေကြသည်။ သငျသညျယရှေုကိုကိုလက်ခံရမည်ဖြစ်သည်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရမည်။ ထိုအခါသင်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေလျက်ရှိသည်။
သို့သော်ဝမ်းမြောက်ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ bargain တွင်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်လမျးစပြောရတဲ့အနေဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခံရဖို့လိုအပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
မသညျယရှေုကြွယ်ဝသောဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ကြဘူး။ သူဌေးပြီးသားရတတ်၏။ သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောခံရဖို့သညျယရှေုလိုအပ်ပါတယ်။
မမိဿဟာရရနျယရှေုသညျလိုအပျပါဘူး။ သူဌေးပြီးသားသူတို့ရဲ့ပါတီများနှင့်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ သူသည်အများသောမိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းခဲ့ရသည်။
ပြီးတော့သင် bargain မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ရ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီနိုငျငံတျောသညျရှေ့တျော၌ရှိခဲ့ထက်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်မိတ်ဆွေများအကြိမ်ပေါင်းများစွာ သာ. ကောင်း၏။ သူတို့ကပဲစြီအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပဘို့ကိုယျတျောနှငျ့မိတျဆှမြေားပါပြီစျနိုငျသလဲ
အဝတ်တစ်ဦးကသူထာဘို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့နိမိတ်လက္ခဏာ, မစည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေ, မကသူ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပါတီများနှင့်မိတ်ဆွေများကြဘူး။
လုကာ 16:20 သို့သော်သူ၏တံခါးနားမှာအနာစိမ်းများနှင့်ဖုံးလွှမ်းလာဇရုအမည်ရှိသောဆင်းရဲသောသူ, အိပ်လေ၏။
ယရှေုသညျဥပမာအမည်များကိုဘယ်တော့မှပေမယ်နာမတော်အားဖြင့်ဤသူဖော်ပြထားခြင်းယရှေု, လာဇရုကို။ ယရှေုသညျကိုမှန်ကန်ဖြစ်ရပ်သရုပ်ဖော်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာလာဇရုကိုသူဌေးရဲ့တံခါးဝနားမှာအိပ်ပြီးမှကြောင်းသိသာသည်။ သူကပင်မဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူကပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။ သူကသူတို့ကိုမစပ်ဆိုင်ကြ။ သူကပြင်ပမှာပဲ!
လာဇရုကိုအနာစိမ်းများအပြည့်အဝဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဌေးမှမတူဘဲ။ သူကကနျြးမာရေးအပြည့်အဝဖြစ်ခဲ့သည်။
သငျသညျယရှေုကိုရှိသည်မဟုတ်, ထို့နောက်သင် irretrievably ထာဝရငရဲကိုရှုံးနိမ့်နေကြသည်။
သူဌေးဒါကောင်းသောခဲ့ပေမယ့်သူ irretrievably ပျောက်။
သို့သော်ယေရှုနှင့်အတူ, သငျသညျကနျြးမာရေးကိုရရှိနိုင်သည်။ ကနျြးမာရေးကသူ့နာမ၌ရှိပါသည်။ သူ၏အနာမှတဆင့်ငြိမ်းစေလျက်ရှိပါသည်။
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ယရှေုသညျသငျသညျမဆိုကျန်းမာရေးရှိပါကသင်ကူညီပေမယ့်မလာတာလဲ? ဆုံးရှုံးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကသူဌေးခဲ့တာရှိခဲ့!
"ညံ့ဖျင်းသောအချင်းလူသား," - ဟုသူနိုင်ငံတော်သို့ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ အတော်များများကဒီကမ္ဘာ့ကုန်ပစ္စည်းများပေါကြွယ်ဝသော်လည်း, သူတို့ကကောင်းကင်ပြာများအတွက်ဆင်းရဲသားဖြစ်ကြ၏။
အတော်များများကယနေ့အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှိသည်။ သူတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ သူတို့ကကောင်းကင်ပြာများအတွက်ကြွယ်ဝသောဖြစ်ကြပြီးအဲဒီမှာတနေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသင်သညျယရှေုကိုလက်မခံခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မွကွေီးပျေါမှာကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအသေခံပြီးနောက်, သငျသညျယရှေုကိုလကျမခံပါဘူး။
သင်သေဖို့အချိန်မယ့်အခါသင်မသိရပါဘူး။ ထို့ကွောငျ့, အချိန်ရှိစဉ်အခါယခုသညျယရှေုကိုလက်မခံဖို့လိုပါတယ်။
21 သူသူဌေးရဲ့စားပွဲကနေကျဆင်းသွားသောအရာကိုသူ့ဝစွာစားရန်တောငျ့။ ဟုတ်ပါတယ်, ခွေးတို့သည် လာ. နှင့်သူ၏အနာစိမျး။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကခွေးကလာဇရု၏အားသာချက်ကိုယူကိုပင်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကသူ့အနာကိုလျက်ပါလျှင်၎င်းတို့သည်အစားအစာနှင့်အနည်းငယ်အပို "အစာ" get ကိုပြု၏။
ဆင်းရဲသောသူအဆက်မပြတ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခဲ့သည်။ သူကအစားအသောက်ကိုအပူတပြင်းလိုအပ်နေခဲ့ပါတယ်။ မိမိအအားနည်းချက်ခုနှစ်တွင်သူအစားအသောက်တွေအကြောင်းအိပ်မက်မက်အဲဒီမှာအိပ်လေ၏။
ဒါကြောင့်ဘုရားသခငျ၏သားနှငျ့အတူရှိ၏။ သူတို့ကသိပ်မမေးကြဘူး။ သူတို့ဟာသူတို့ယျနဲ့အတူပျော်ရွှင်ကြသည်။ သူကဖူးသင့်တယ်အဖြစ်သို့သော်ဆင်းရဲသောသူကိုပင်တပင်မျှမရှိခဲ့သည်။
သူသည်ဆင်းရဲသောသူသည်ဖျားနာခြင်းနှင့်စိတ်ဆင်းရဲ, တံခါးရှိကို တင်. , အတွင်းရှိစားပွဲပေါ်မှအစားအစာ၏အိပ်မက်ကိုမြင်မက်။
အဘယ်သူမျှမကသူပေမယ့်စားပွဲအောက်၌အစအနများ, ကျောက်ပြားပေါ်မှာအစားအသောက်တွေအကြောင်းအိပ်မက်မက်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်မပေးပင်ဤအစအနသူကိုယ်နှိုက်ကရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။
ခွေးသငျသညျဣသရအတွက်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်နိမ့်ဆုံးအကြားခဲ့ပေမယ့်သူသည်ဆင်းရဲသောသူနှင့်အတူ socialized ဤအတူရှိ၏။
ကောင်းကင်တမန်တို့အိမ်သို့ Saved ခေါ်ထုတ်
လုကာ 16:22 ဒီတော့ဆင်းရဲသောသူကိုသေသည်အာဗြဟံနှင့်အတူနေကောင်းကင်တမန်တို့ကသယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပင်သူဌေးသည်လည်းသေလွန်ခြင်းနှင့်သင်္ဂြိုဟ်လေ၏။
ဆင်းရဲသောသူလာဇရုသေခံတော်မူ၏။ သို့သော်အံ့သြဖွယ်အရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်တမန်များ လာ. သူ့ရတယ်။
ထိုသို့ယရှေုကိုယုံကြည်သောသူတို့အဘို့အသေခံရန်အချိန်ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်များနှင့်နေအိမ်, ကောင်းကင်ဘုံမှသူ့ကိုခေါ်ထုတ်အခါ။ ယရှေုသညျသူတို့ယုံကြည်ကိုးစားပြီဖြစ်ပါတယ်ရာကောငျးကငျဘုံသည်။
နိုငျငံတျောသညျ (ofrälste) ငရဲကိုဖြောင့်သည် လာ.
ဒါပေမယ့်သူဌေးနှင့်အတူမရှိ။ သော်သေလေ၏, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမကောငျးကငျတမနျရှိခဲ့သည်သည့်အခါ လာ. သူ့ရတယ်။
ဒါဟာသူကွယ်လွန်သွားခြင်းနှင့်သင်္ဂြိုဟ်လေ၏သာကပြောပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကကောငျးကငျတမန်တို့ကို။ ထိုအခါလာမည့်ကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင်ကျွန်တော်သူငရဲ၌ပါသောကြည့်ရှုပါ။
သူ့ကိုယူမပင်မဆိုနတ်ဆိုးများရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အပြီးသူသေဆုံးခဲ့ကြောင်း, ဒါကြောင့်သူကညာဘက်ကိုငရဲသို့ကိုယ်တော်တိုင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သငျသညျအသေကောင်ကိုပြီးတာနဲ့, ထို့နောက်ကအဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျဝိညာဏနှင့်သတိပြည်နယ်တွင်နေထိုင်ကြမည်။
သငျသညျသေဆုံးသည့်အခါထိုနညျးတူကဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျယရှေုကိုပိုင်လျှင်, သငျသညျယရှေုကိုဘယ်မှာကောင်းကင်သို့ကောင်းကင်တမန်များအားဖြင့်ယူဆောင်ပါလိမ့်မည်။
သူကငရဲ၌ညှဉ်းဆဲခံခဲ့ရသည့်အခါလု 16:23 ထိုသူသည်မိမိမျက်စိရုပ်သိမ်းနှင့်ဝေးသောနှင့်လာဇရုကိုသူ့ကိုမှာအာဗြဟံကိုမြင်တော်မူ၏။
အဘယ်သူမျှမ, ငရဲပျင်းရိမဟုတ်ပါဘူး။ အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှရှိလှုပ်ရှားမှုတစ်အုံရှိပါသည်။
သူကငရဲ၌ညှဉ်းဆဲခဲ့သညျ။ ဤရွေ့ကား, ညှဉျးဆဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဆုံးသတ်တာပါ။
ငွေရတတ်သောသူကိုငရဲ၌တစ်ဦးသတိဖြစ်တည်မှုအတွက်အသက်ရှင်။ , ထိုမင်းသည်အောက်မေ့။ မိမိအမတရားသောသူသည်ဘဝ - သူကသူ့ဘဝကိုအောက်မေ့။
သူကငရဲမှာမြင်နေရတယ်။ ဒါဟာသူသည်မိမိမျက်စိကြီးပြင်းလို့ပြောပါတယ်။ ငရဲ၌နေသောသူတို့သည်သတိဖြစ်တည်မှု၌ရှိကြ၏။
ငရဲသူမြို့သားကလူကိုအသိအမှတ်မပြု။ သူလာဇရုကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ သူဟာသူသိသည်။ သူကမိမိတံခါးကိုမှာအိပ်ရန်အသုံးပြုတော်မူသောသူဖွစျသညျကိုသိ၏။
လုကာ 16:24 ထိုမင်းကိုအျောဟစျ: အဘခမည်းတော်သည်အာဗြဟံ, အကြှနျုပျကိုသနားတျောမူပါနှင့်ငါသညျဤမီးလြှံ၌ညှဉ်းဆဲငါအဘို့, ရေထဲမှာလက်ညှိုးများ၏အစွန်အဖျားနှစ်နှင့်ငါ့လျှာကိုအအေးလာဇရုကိုပေးပို့ပါ။
အဲဒီမှာငရဲ၌ဆုတောင်းအစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့bönerna.Detရန်မတုန့်ပြန်ရယေရှုရဲ့နာမတော်၌ဘုရားသခင်အားဆုတောင်းဖို့မွကွေီးပျေါမှာကဒီမှာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်ပြုသောပဌနာအဖြေများကိုရညျမွကွေီးပျေါကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်သညျယရှေုခရစျသကိုလက်မခံခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မွကွေီးပျေါမှာကိုဤနေရာတွင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသိပ်နောက်ကျဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက။ ငရဲ၌မကယ်တင်ရှိပါသည်။
ထိုကွောငျ့, သူလာဇရုကိုလာနဲ့သူ့ကိုရေပေးမယ်ဆိုပြီးချင်တယ်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူဘို့ရေလည်းမရှိ, ဒါပေမယ့်ငရဲ၌သာမီးရှိပါတယ်။
ဒါဟာသူဌေးများနှင့်လာဇရု၏ဇာတ်လမ်းဖတ်ရှုဖို့ Hilary ပါပဲ။
ဆင်းရဲသောသူစားပွဲကနေကျဆင်းသွားကြောင်းပင်မရှိနှင့်အလားတူငွေရတတ်သောသူသည်ရေတိုငျြတယျ။ "ရေထဲမှာလက်ညှိုးများ၏အစွန်အဖျားကိုဖတ်ရှုပါ ... " သူကအများကြီးအဘို့မမေးခဲ့ဘူးပေမယ့်ရဖို့လုံးဝဘာမျှရှိ၏။
"ငါကဒီမီးလျှံထဲမှာညှဉ်းဆဲနေပါတယ်။ " ငရဲမှာညှဉျးဆဲ။ ငရဲ၌ငွိမျးဘယ်တော့မှသောမီးလည်းမရှိ။ ဒီမီးမှာ, တစ်ကြီးမားခြင်းနှင့်မခံနိုင်သောညှဉျးဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသူဌေးများနှင့်လာဇရု၏စစ်မှန်သောသောဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကိုပြောပြသောယေရှုကိုဖြစ်ပါတယ်။ ယရှေုသညျငရဲ၌မီးလည်းမရှိကပြောပါတယ်။ ဒီမီးထဲမှာလူတွေကိုညှဉ်းဆဲ။
လုကာ 16:25 - သို့သော်အာဗြဟံသည်အချင်းလူသား, သငျသညျအသကျရှငျစဉ်လာဇရုကိုမကောင်းသောအထွက်ရတယ်နေချိန်မှာသင်က, သင်တို့၏ကောင်းသောအမှုအရာကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ကပြောသည်။ အခုတော့သူကနှစ်သိမ့်နှင့်သင်ညှဉ်းဆဲဖြစ်ပါတယ်။
"ကိုသတိရပါ ... "
ငရဲ၏မြို့သားသေဆုံးမှုမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကမမေ့မလြော့ပါ။ တကယ်တော့သူတို့မအောက်မေ့သာ။ သူတို့ကအစသတိပေးခဲ့သည်။
သူတို့သာနောင်တတရား၏အတွေးမပါဘဲ blithely အပေါ်ပြစ်မှားမိကြောင်းသတိရပါ။
ဤသည်အကြီးမြတ်ဆုံးသောဝဒေနာဖြစ်ရပါမည်။ မိမိအbångstyrighet Remembering ။
သူကအသကျရှငျအခါသူဌေးသည်သူ၏ကောင်းသောထဲကရတယ်, ဒါပေမယ့်ယခုသူသည်လူဆိုးမရပါလိမ့်မယ်။ ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုယခုသူနှင့်အတူချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားပေးခဲ့သည်။
လာဇရုကိုနထေိုငျခဲ့လျှင်, မိမိမကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးထွက်ရတယ်, ဒါပေမယ့်ယခုသူသည်မိမိအကောင်းရလိမ့်မယ်။ သူဟာညာဘက်အရပ်မှအိမ်ပြန်လာခဲ့ကြောင်းကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ, သက်သာခြင်းလည်းမရှိ။ ဒါဟာဖြေနှင့်လနျးဆနျးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ငရဲညှဉ်းဆဲခြင်း၏နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်ရွေးချယ်မွကွေီးပျေါမှာကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသက်သာတည်နေရာအရချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျယရှေုကိုကိုလက်ခံရပေမည်။
ဒါကနည်းနည်းထူးဆန်းပုံရတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကစဉ်းစားလျှင်တစ်ခုကြီးမားသက်သာပေးသည်လိမ့်မည်။ သင်ငရဲသွားမအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ, ကယ်တင်ခြင်းသို့နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ယေရှု၏အသွေး၌စင်ကြယ်စေရသည်။
သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောနေကြသည်။ အဆိုပါကြီးမားတဲ့ကွာဟမှုငရဲသွားသငျသညျကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါဟာသင်ကာကွယ်ပေးသည်။ သငျသညျပျောက်ဆုံးသွားစိတ်ပူဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သငျသညျကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေကြသည်။
လုကာ 16:27 - သူဌေး said: ထိုအခါငါ, ခမညျးတျောသငျမေး, သငျသညျကြှနျုပျအဘ၏အိမျတျောထံသို့စလှေတျသော။
သူကအသကျရှငျခဲ့သောအခါသူကအခြားလူတွေကိုဂရုစိုက်ပေမယ့်ယခုရုတ်တရက်သူကလုပ်ဖို့စတင်ခဲ့ပေမယ့်အခုသိပ်နောက်ကျခဲ့ကြဘူး။ ငရဲ၌, သင်ပြုသောပဌနာမဆိုအဖြေကိုမရနိုင်ပါ။
ထိုအခါလညျးမိမိမိသားစု, ညီအစ်ကို, ညီအစ်မများနှင့်အတူတူပင်ဖခင်ရှိနသောသူသည်မိမိအဘရဲ့မိသားစု, ရန်။
သူဌေးအစဉ်အဆက်ကသူ့မိသားစုကိုနှောင့်အယှက်မရှိခဲ့ပေ။ သူ့မိသားစုက? သူ့သူငယ်ချင်းတွေ? အခြားလူများ? သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ပွဲတော်များနှင့်အပန်းဖြေသူသာစိတ်ဝင်စားခဲ့သလဲ
ကမ္ဘာမြေရဲ့မြို့သားတို့ကိုသူတို့အဲဒီမှာ get ချင်ဘဲငရဲ၏ပဌနာစကားကိုနားထောငျနိုငျပါဘူး။
"ညှဉ်းဆဲခြင်း၏နေရာ" ။ ဒါဟာစုရုံးရာအရပျ, ပြီးတော့ဘာမှထပ်မသာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမက, ညှဉ်းဆဲခြင်း၏နေရာတစ်နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငရဲညှဉ်းဆဲခြင်း၏နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။
လုကာ 16:28 - သူတို့လည်းညှဉ်းဆဲခြင်း၏ဤအရပျသို့ကွှလာမည်ကို စိုးရိမ်. , ငါ့ငါးကညီအစ်ကိုတွေကသတိပေးပါတယ်။
ကျနော်တို့ကသူပြုသကဲ့သို့သူဌေးရဲ့ညီတူညီလမ်းအတွက်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နေထိုင်နေကြနားလည်ပါသည်။ ပွဲနေ့များနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအနေ့တိုင်း။ တစ်ခုချဉ်းကပ်ထာဘယ်မှာရှိသနည်းဟုထာဝရဖြုန်းဖို့တစ်အတွေးမပါဘဲတစ်ဦးမစိုက်ဘဝ။
သို့သော်ငရဲ၌ဆုတောင်းပဌနာစရာအဖြေကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင်မေးမွကွေီးပျေါမှာကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသိပ်နောက်ကျဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက။
"ဒီတော့သူတို့ကလည်းညှဉ်းဆဲခြင်း၏ဤအရပ်သို့မလာကြဘူး။ " ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံအဖြစ်မှန်တစ်ဦးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်မှာရှိလူတွေကိုလာနိုင်ပါတယ်။ ထိုအရပ်၌ရသောသူတို့ကိုလည်းသေဆုံးမှု၏နောင်တရကြပြီမဟုတ်သောသူဖြစ်ကြ၏။
ထိုအရပ်ကိုငရဲတစ်ဦးအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကသူဌေးဆက်ဆက်အတွေ့အကြုံရတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုသူကစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအရပျကိုကြီးသိ, သူသည်မိမိညီအစ်ကိုတို့သည်ဤတွေ့ကြုံခံစားမယ်လို့မလိုချင်ခဲ့ပါဘူး။
ငရဲ၌လူမျိုး, ညှဉ်းဆဲခြင်းနှင့်ညှဉ်းဆဲ။ ထိုမျှမကပဲခဏအဘို့, ပြီးတော့သူကရပ်တန့်။ အဘယ်သူမျှမ, အစဉ်အမြဲပေါ်သွားပါ။ ထာဝစဉ်။
လုကာ 16:29 - သို့သော်အာဗြဟံကိုသူတို့ကမောရှေနှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းရှိသည်, ကဆိုသည်။ သူတို့ကနားမထောငျရလိမ့်မည်။
။ သူတို့ကမောရှေနှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းရှိ "အာဗြဟံသည်အဖြစ်ကောင်းစွာပြောဆိုကြပြီမယ်: သူတို့ကသမ်မာကမျြးရှိသည်။
ဆွီဒင်အများအပြားအိမ်များကိုယနေ့, သမ္မာကျမ်းစာ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည့်စာအုပ်စင်စုရုံးမွမှေုနျ့၌တစ်ခွင်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုသို့ပြုကြ၏။
ကမျြးစာကိုဖုန်မှုန့်။ ဒါကြောင့်ဖွင့်ပါနှင့်ဖတ်ရှုဖို့စတင်ပါ။ ယုံကြည်!
သငျသညျကမျြးစာကိုဒါပေမဲ့ဘာမျှမလိုအပ်ပါ။ သငျသညျအဘယ်သူမျှမကအခြားစာအုပ်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ ကမျြးစာကလုံလောက်ပါတယ်။
သငျသညျသက်သေပြချင်, သင်ကျမ်းစာဖတ်သင့်ပါတယ်။ သင်ကမျြးစာကိုဖတ်သင့်, အမှန်တရားချင်တယ်။ ထိုအခါသင်ကယုံကြည်သင့်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာ၏ညာဘက်နားလည်မှုရှိသည်နှင့်ယုံကြည်ခွင့်ရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်, ထို့နောက်ယေရှုလိုအပ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ယေရှုလိုအပ်ပါတယ် ယုံကြည်. သမ္မာတရားကိုသိလိမ့်မယ်။ ယေရှု၌သငျသညျကိုငါသိ၏။
ယရှေုသညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့သမ်မာကမျြး၏စကားမှန်ကန်စေသည်။ သင်အမြဲယေရှု၏အခြေခံပေါ်မှာကျမ်းစာဖတ်သင့်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်ရသေးပြုကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်ယရှေုသညျလကျခံဖို့လိုပါတယ်။
မြေတပြင်လုံးကမျြးစာကယေရှုအကြောင်းဖြစ်ပါသည် - ဖုံးထဲကနေဖုံးရန်။ ပထမဦးဆုံးကျမ်းပိုဒ်ကနေနောက်ဆုံးကျမ်း။
သငျသညျအဘယ်သူမျှမကအခြားစာအုပ်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်နားထောင်ရန်ကပြောပါတယ်ဘယ်သို့ပြုကြလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းသမ္မာကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။ အမည်ရသညျယရှေုကိုလက်မခံဖို့နဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်!
ခရမ်းရောင်နှင့်ပိတ်ချောကိုဝတ်လျက်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်အခမ်းအနား၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေထိုင်ခဲ့ခံခဲ့ရသူတစ်ဦးသူဌေးရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သူ၏တံခါးနားမှာအနာစိမ်းများနှင့်ဖုံးလွှမ်းလာဇရုအမည်ရှိသောဆင်းရဲသောသူ, အိပ်လေ၏။ သူကသူဌေးရဲ့စားပွဲကနေကျဆင်းသွားသောအရာကိုသူ့ဝစွာစားရန်တောငျ့။ ဟုတ်ပါတယ်, ခွေးတို့သည် လာ. နှင့်သူ၏အနာစိမျး။
ဒါကြောင့်ဆင်းရဲသောသူကိုသေသည်အာဗြဟံနှင့်အတူနေကောင်းကင်တမန်များကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ပင်သူဌေးသည်လည်းသေလွန်ခြင်းနှင့်သင်္ဂြိုဟ်လေ၏။ သူကငရဲ၌ညှဉ်းဆဲခံခဲ့ရသည့်အခါသူကသူ့မျက်စိရုပ်သိမ်းနှင့်သူ့ကိုမှာအာဗြဟံသည်ဝေးသောနှင့်လာဇရုကိုမြင်တော်မူ၏။ သူက, ခမညျးတျောကိုအာဗြဟံမှထွက်ကိုခေါ်ငါ့ကိုမသနားတျောမူငါသည်ဤမီးလြှံ၌ညှဉ်းဆဲငါအဘို့, ရေထဲမှာလက်ညှိုးများ၏အစွန်အဖျားနှစ်နှင့်ငါ့လျှာကိုအအေးလာဇရုကိုပေးပို့ပါ။
သို့သော်အာဗြဟံသည်အချင်းလူသား, သငျသညျအသကျရှငျစဉ်လာဇရုကိုမကောင်းသောအထွက်ရတယ်နေချိန်မှာသင်က, သင်တို့၏ကောင်းသောအမှုအရာကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ကပြောသည်။ အခုတော့သူကနှစ်သိမ့်နှင့်သင်ညှဉ်းဆဲဖြစ်ပါတယ်။ လူအပေါငျးတို့ဤသည်သင်တို့အားဒီကနေကူးချင်တဲ့သူတွေကိုရှိဖို့မရှိမှမဟုတ်သလိုမည်သူမဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကူးလာနိုင်မည်အကြောင်း, ငါတို့နှင့်သင်တို့စပ်ကြားကြီးမားတဲ့ gaping တွင်းနက်ပါတယ်။
ငွေရတတ်သောသူသည်လူ said: ထိုအခါငါ, ခမညျးတျောသငျမေး, သငျသညျကိုသူတို့လည်းညှဉ်းဆဲခြင်း၏ဤအရပျသို့ကွှလာမည်ကို စိုးရိမ်. , ငါ၏အငါးခုညီအစ်ကိုတွေကိုသတိပေးဖို့ငါ့အဘ၏အိမျသို့သူ့ကိုပေးပို့ကြောင်း။
သို့သော်အာဗြဟံကိုသူတို့ကမောရှေနှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းရှိသည်, ကဆိုသည်။ သူတို့ကနားမထောငျရလိမ့်မည်။
အဘယ်သူမျှမပါအဘအာဗြဟံ, '' သူကပြန်ဖြေပေမယ့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသေခြင်းမှသူတို့ကိုသွားလျှင်, သူတို့သည်နောင်တရကြလိမ့်မည်။
အာဗြဟံသည်သူတို့မောရှေနှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းမကြားလျှင်, သူတို့သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသေခြင်းမှထလျှင်ပင်ယုံကြည်မည်မဟုတ်ပါဟုမိန့်တော်မူ၏။ "
လုကာ 16: 19-31